Otu igwe gbara oso oso ije? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Unicycle agbụrụ - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Unicycle agbụrụ - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Otu igwe gbara oso oso ije?
Ọ na-egosi na ọ bụrụ na a na-ekpuchi anya, ma ọ bụ oge a na-ekpuchi,na-agba ịnyịnyabụ nnọọ odika okpukpu abụọ ka oru oma kana-eje ijena ọkara ka ịrụ ọrụ dị ka ịgba ígwè.20 nke 20 2020bọchị 2020
San Francisco Bay the Waterfront bụ ezigbo eserese maka ndị mmadụ na-achọ mmega ahụ, site na ndị na-agagharị agagharị na ndị na-agba ọsọ gaa marathoners siri ike. Ndị mmadụ na-achọ ịgbatị akụkụ ha na mgbe ahụ enwere nwoke a Ọtụtụ mmadụ na-ele nnụnnụ anya ma nwee nrọ nke efe efe m lere enyí nnụnụ ahụ wee rọọ nrọ banyere otu mmadụ ga-esi gbaa ọsọ ọsọ aha m bụ isi ihe m na-ahụ karịa abụ m onye nchepụta na onye guzobere Taa ọ na - anwale ọrụ ndụ ya n'ọgba siri ike na ugwu Marin County. M na-agba ọsọ na Golden Bridge Bridge m na-agba ọsọ Ọ na-adị m ka a tụbara m na ikuku dịka anụmanụ ma ọ bụ nnukwu anụ ọhịa n'ihi ya, ọ bụ mmetụta nke akpụkpọ ụkwụ, ọ dị obere ka trampoline, dị ka nke catapult, yabụ katapila ọ bụla ooh fọrọ nke nta ka ọ bụrụ A 45 Keahi kpachara anya iji gbatịa akụkụ ya na oke ya, na mbido, buut sitere n'ike mmụọ nsọ nke ụmụ anụmanụ ọsọ ọsọ n'ụzọ ha si echekwa ume na-agbanwe na akwara Achilles pụrụ iche nke na-eme ka esemokwu ahụ dị n'azụ na-echekwa ike ha na-atụ na ụkwụ enyí nnụnụ. Achọrọ m ile anya na physiology ya banyere ọkpụkpụ na akwara usoro yana etu ha si agba ọsọ n'ogologo buut na-enye gị ogologo ngwangwa ogologo ka ogologo ije a na - abawanye ọsọ, dịka ọmụmaatụ Ostrich nwere onwe ya m ga-ije ụkwụ 20 ruo 25, nke dị ugbu a 1 0 ruo 12 ụkwụ ß? Achọrọ m ịbawanye nke a ka m wee nwee ike ịnweta ngwa ngwa nke 45 mph.
Ọ bụ nro ọ na-achụ kemgbe ihe ruru afọ iri abụọ. Ebuuru m afọ mbụ mgbe m dị afọ iri na asatọ enweghị echiche ọ bụrụ na ọ ga-arụ ọrụ, ndị enyi m niile chịrị ọchị na echiche ochie ahụ na ụdị nke ahụ. N'oge ahụ, m na-eji Bungee CordJust dị ka ọnya mmiri ma mgbe m mere nke mbụ. Nzọụkwụ Ọ bụ ihe na-egbu egbu egbu ịnụ na ike jidere ike ọ bụla. Ọ kwụsịrị mgbe usoro ole na ole gasịrị.
Mana ọ bụ nzọụkwụ mbụ na ụzọ anyị na-ahụ ebe a taa. Pathzọ a adịtụghị ezigbo mma, mana ọ kpebisiri ike imeri bumps nke a prototype Ya mere, ị na-ahụ mgbanwe nke bionic buut amalite na ụfọdụ nke mbụ prototypes, niile nke ndị a, nri? Lee ị na-achọkarị ibelata ibu nke buut anyị nwere ike ịhụ. Versionsdị nke oge opupu ihe ubi nke oge opupu ihe ubi n'onwe ya ga-eji ụdọ nke bungee nke ejiri rọba sitere na tubes harpoon, dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, obere ihe siri ike, yabụ naanị eriri eriri ogologo nke gbara gburugburu nke a bụ ụdị 2008 ị hụrụ ebe a fọrọ nke nta 15 17 sentimita asatọ n'elu ala asatọ nke akpụkpọ ụkwụ nwekwara kwukwara ibu ọbụna na 2014 Keahi akpatre wee na kacha na abụọ ahu imewe.
Nke a bụ ihe ngosi dị ugbu a m na-eji taa, ụdị x14 bionic boot boot with the same shapes, just a little more polished, without give up that do-it-yourself charm, ị mepụtara ejiji. Anyị nọ ebe a Anyị gbagara taya igwe kwụ otu ebe na mpempe ụfụfụ wee tinye ya na mpempe aluminom ebe a Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Keahi na akpụkpọ ụkwụ ya na-enwe nsogbu n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla, echere m na ọ bụ n'ihi ọdịnihu anụmanụ anụmanụ ọ bụ akụkụ nke Sci- Fi akụkụ nke ụkwụ robot. Echere m na ndị mmadụ nwere mmasị na akpụkpọ ụkwụỌ bụghị ha niile ga-achọ ịnwaleMa pasent ị chọrọ ịnwale, chọrọ ịzụta ha ozugbo n'agbanyeghị ọtụtụ iri afọ nke ọrụ? Ọ chọrọ ịga n'ihu m na-ahụ bionic akpụkpọ ụkwụ nke mfe a mmalite nke a exoSkeleton na Gị arụmọrụ na okwu nke na-agbakwunye actuators na ịba ụba nke ike ma ọ bụ ọsọ na-abawanye otú ihu ọma a mmadụ nwere ike dị nnọọ njem ngwa ngwa, yah, ọ na-nrọ nke na-eweta ya bionic buut gaa n'ahịa.
O nweghi nkwekorita, mana o nwere otutu ndi nwere mmasi, obughi ikwuputa patent nke uwa ugbu a. Ọ na-aga n'ihu ịchụso nrọ nwata ya wee chere ka ụwa jide. Ihe kachasị mma nke akpụkpọ ụkwụ bionic anaghị eme ya ngwa ngwa n'onwe ya? Mana umuaka choro igba ndi umuaka ume, ka ha gaa na ndi sayensi ka ha nwee mmekorita. Agwara m ha na emere m ihe osise mbu ahu mgbe mdi aho iri na abuo ma olile anya na aga m akpali ha ka ha mee oru ndi sayensi n’onwe m. Oh ezigbo ezigbo jumpaudiojungle, daalụ na ị na-enwe oge dị egwu, ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a biko hapụ ikwu okwu n'okpuru ma denye aha
Kedu nke bụbu ịnyịnya ma ọ bụ ịnyịnya ibu?
Ukpuru-enweghị atụbịaramgbe mepụtara nkembụ ịnyịnya(gụkwuo naAkụkọ banyere igwe) na mgbe mepụtara penny-farthing (gụkwuo na TheAkụkọ ihe mere eme nkeOgbogu Okonji) Mgbe ntọhapụ nke penny-farthing, ndị mmadụ ghọtara na ha nwere ike ịkwado na wiilị buru ibu.Sep 25 2017
Naanị ihe dị iche bụ n'ezie na ị ga - ahụ etu etu post ahụ siri gbọọ, ọ bụghị girly, mana ọ na - abụkarị ihe ịrịba ama maka onye na - amalite ịnyịnya ígwè na onye a nwere otu ihe ahụ CH gbagọrọ agbagọ, mana mgbe ahụ ịmara nke ọma ugbu a, Ya mere, ihe anyị ' aga m ekwu okwu banyere nha mbụ, nke a bụ ịnyịnya ígwè 24 nke anụ ọhịa m na-eji maka ebumnuche nkịtị dịka ị ga-agagharị ọ dịkwa mma maka ịnya ugwu ịnyịnya abụọ ị nwere ike ịhụ na ọ bụ 24 x 2, 5, yabụ ee, nke a, nke etiti, ọ bụ na mbụ 20 x 1.95 mana nke ahụ bụ n'ezie n'ezie ọ nwere ike bụrụ 75 dị nsọ mana ọ mara mma nke ukwuu dịka obere egwuregwu dị ka ike gwụrụ na nke ahụ nwetara m Enweghị m mmasị na ya n'ezie n'ihi na m bụ naanị onye mbido ịnyịnya ígwè na ka m gbasiri ike, enwetara m taya ka ibu, nke ahụ bụ 20x2 ọ dịkwa mma ma dị mfe ijide ebe a, ihe ọzọ bara ezigbo uru bụ nha oche dịka ebe a abụghị n'ezie oche oche kama na s itzform ist e nwere ndị dị ka ndị a naanị mbụ nkịtị oche guzo n'ebe ahụ bụ ndị dị otú ahụ a s ndị a na-egosi a bit mma na ha nwere ebe a dị ka a bompa na i nwere ike were ya na aka gị na azụ guzoro na nke a bụ ihe dị ugbu a n'ugwu m unicycle, nke a bụ nke m Favorite uwe ọ bụ ezigbo mma na o nwere a plastic azụ dị ka ị nwere ike ịhụ na m nwetara ya na weebụsaịtị Unicycle Quiet bara ezigbo uru yana n'ihu mgbochi nke na - eme ka ị nwee ike itinye aka gị n'aka ya, jide ya n'ụzọ ahụ nke ọma, yabụ gosi m na m ga - enye gị ụfọdụ n'ime ya na - esote ị dị iche iche na ọghọm dị iche iche, ọ dị mma, ugbu a, m na-agba ịnyịnya ndị ahụ niile ọzọ, m na-agwakwa gị uru na ọghọm dị na nke ọ bụla, yabụ m ga-ebido nke pere mpe.
obere abụba vs ala carb
Nke a bụ ihe m kacha hụ n'anya overbunch, tumadi n'ihi na cranks ihe ndị a ebe a na-aga n'etiti axle ma ọ bụ ehiwe na pedal bụ obere ka ha wee mara mma a obere ngwa ngwa ma n'ezie iwe iwe tụnyere ndị ọzọ na m na-egosi gị 20 sentimita asatọ Unicycle crank size bụ mara mma nke ukwuu n'etiti ihe niile dị iche iche nha oche dị mma nke ukwuu n'ime ihe ndị kachasị amasị m bụ naanị nha nke cranks nke nha nke pedal na-eme wheelit maka ezigbo mma ebe a ọ bụghị ezigbo mma maka freestyle ma ọ dị mma ugbu a nke a bụ 24 nke anụ ọhịa ahụ nke a bụ ọkacha mmasị m na igbe ahụ n'ihi na taya ahụ dị ukwuu karịa olu ka ọ bụrụ ihe na-agbanwe agbanwe ebe a ka etiti ahụ dị larịị ka ị wee nwee ike ịpinye ụkwụ gị na ya oke crank dị oke ibu, yabụ ọ bụ ezigbo ntụgharị asụsụ na pedals dịkwa mma nke ukwuu ebe a anyị na-aga nke ukwuu iji wepu ya, ị nwekwara ike ịwụ elu nke ukwuu, nke a dịkwa mma n'ihi na akụrụngwa kwesịrị ekwesị maka otu ụkwụ dabara adaba, yabụ ee, ka anyị mee ya nke ọma , yabụ ebe a ka m ga-ekwu okwu, ka anyị gaa ka ee nke ahụ bụ ihe dị mma na etiti ị nwere ike ịrapara ụkwụ gị na ya nke mara mma niile maka ugbu a rue mgbe emesịrị gbasara gị
Olee otú ịnyịnya ígwè si dị ize ndụ?
Na-agba ịnyịnyabụ n'ozuzu adịghịdị ize ndụ, ma na-atụ anya na ị ga-ada ọ bụla ugboro ugboro, ọkachasị mgbe ị na-amụ ihe. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'imeigweỌdaba na-eme ka onye na-agba ya rute na-eguzosighị ike na ụkwụ ha. Anyị na-atụ aro ka ị kpu okpu na mkpuchi nche, ndị na-agba snịịka na traụza.
JACK OLSEN: E nwere mkpakọrịta a na-enwe mgbe niile n'etiti unicycle na circus. Enweghị m ike ịga n'ihu na ịbụ onye na-egwu egwu. Ọ na-amasị m ịgba ọsọ ya maka egwuregwu.
Anyị malitere ịnya ụgbọ ịnyịnya n'ihi na ozugbo ị kwụgidere ya n'okporo ụzọ, ị ga-aga n'okporo ụzọ ahụ ma ọ ga-eju afọ. ROSS BRADLEY: Anyị bụ naanị ụfọdụ ndị mmadụ nwere mmasị na ya Iji chọpụta ugwu ahụ, ọ bụ veryzọ dị oke mkpa, ịgaghị aga ije n’ime ọhịa. JACK OLSEN: work na-arụ ọrụ maka anụ ọhịa ọ bụla.
Ikwesiri iburu uzo ozo ichoputa ka i wee zaa ya. Mgbe a mgbe ị na-a echiche nke ihe nkume i nwere ike n'ezie ụgbọala n'elu. Start malitere ịkwanye nke ahụ na nke ọzọ.
ROSS BRADLEY: Ya mere Bryce bu onye buru ibu, nwoke siri ike ma o na agba ịnyịnya buru ibu, uzo di ike. Ọ bụ a nnukwu mpempe anụ na-eme ka ụzọ Jack bụ incredibly ngwa ngwa, ijiji n'ebe nile. JACK OLSEN: Echere m na m na-achọ ịkwanye onwe m site na itinye ọsọ, n'ihi ya, ihe nwere ike ịga ọsọ ọsọ ngwa ngwa, ọtụtụ oge ọ na-arụ ọrụ.
ROSS BRADLEY: Monty, ọ bụ n'ezie. Ọ naghị agba ịnyịnya ogologo oge ahụ. Anyị na-akpọ ya Superman nwa oge n'ihi na ọ bụ otú ọ ga-esi daa ihe ọ bụla si na ya.
CHAD RAMBERG: Anọ m na-eche ihu. ROSS BRADLEY: Ma m. Ọ na-amasị m ịga ije n'ụzọ aka ike n'ọhịa.
Ọ na-amasị m ịga ihe ndị dị larịị. Ọ na-amasị m ịgafe ihe na-adịghị ka ị ga-ebugharị ha. BRYCE JACOBSON: Ọ dị ka ịkụkụ mkpịsị aka 10,000 n'otu oge, Russ.
Got nwetara ya, nwunye. RUSS BRADLEY: Nke ahụ bụ igwe, ọ bụ ihe pụrụ iche n'ihi oke taya na ikuku ikuku enwere ike ịba. Taya taya abụba dị mma.
Ọ na-ebufe okwute, osisi, apịtị, griiz, ájá. Kwado ya dị ezigbo mkpa. Ọ na-enyere aka ị na-agbanye ụkwụ gị na petals.
Ọ nwere brekị. Ndị a bụ hydraulic. So unicycles anaghị apụ.
BRYCE JACOBSON: Ọ D, MMA, yabụ mgbe ị na-ezukọta igwe ịnyịnya ígwè ịchọrọ ijide n'aka na pedal gị dị ebe kwesịrị ekwesị. Ya mere, ịchọrọ ị nweta onwe gị pedal nke na-akpali ịnyịnya ígwè n'okpuru gị.
garmin gps ọsọ ọsọ
JACK OLSEN: Mgbe m nọ na mahadum, otu n’ime anyị niile mụtara ịgba ịnyịnya ígwè. Anyị ruru ebe anyị na-anyazu ebe niile kampos. Anyị kwọọrọ na klas.
Anyị nwetara ọtụtụ nlebara anya, ma eleghị anya ọ bụghị ihe anyị na-achọ. ROSS BRADLEY: Enweela m ike ịgba ịnyịnya ígwè kemgbe m dị afọ iri na abụọ, afọ iri anọ ugbu a. A kwara m emo mgbe m bụ nwata.
Maka na umuaka na achota ihe ndi ozo ighoro umuaka ndi ozo. Achọghị m ịma. Nke ahụ bụ ihe m.
M na-eji ịnyịnya ígwè m arụ ọrụ. Ana m arụ ọrụ na ụlọ ọrụ gọọmentị etiti. M na-adọba ya kpọmkwem n'ihu ọnụ ụzọ.
Onye ọ bụla ma onye m bụ. CHAD RAMBERG: Enwere m ya ma emechaa na ndụ Akụkụ kacha sie ike bụ awa iri nke ọdịda, na-ada n'ihu gị maka awa 10. Ọ bụ ihe ịma aka.
ROSS BRADLEY: Na igwe, ị nwere ike gbagọrọ agbagọ n'ụzọ na-ezighi ezi na nkeji ikpeazụ, ma ọ bụ nke ka njọ, pedal gị anọghị ebe kwesịrị ekwesị. Ihe ga-agbakọta, na mgbe ha mere ọ dị mma, na mgbe ha adaghị Ọ bụrụ na ị daa, ị naghị eme ya n'ụzọ ziri ezi. C HAD RAMBERG: Ọ bụ ụdị mmadụ ụfọdụ nwere mmụọ ịnya ịnyịnya ígwè.
Kwesighi ịtụ ụjọ na ị dị nzuzu ma ọ bụ chegbu onwe gị banyere ihe ndị mmadụ na-eche banyere gị, obi ụtọ na mkpali nke ime ihe ị na-amaghị na ị nwere ike ime. BRYCE JACOBSON: Ma ị mara na, ozugbo ị kwụgidere ya, ọ naghị esiri gị ike karịa ịgba ịnyịnya ígwè. AKW NKWỌ: Ihe Nkọwa niile bụ akụkụ nke Akụkọ Ọchụchọ, ọwa nke nwere obere akwụkwọ akụkọ sitere na gburugburu ụwa.
Gbalia lelee akwukwo anyi banyere mgbanwe igwe igwe. Isiokwu: M na-atụgharị n'okporo ụzọ. Cargbọala a nọ n'ihu m.
O nwere onu igwe gburugburu ya. Isi m gara n'ime ụlọ ahụ, dị ka ọkpụkpụ. AKW :KWỌ: Ihe ọhụụ ọ bụla na Tuesday ọ bụla.
Biko ịdenye aha.
Egwuregwu n'egwuregwu enweghị egwuregwu?
Na-agba ịnyịnyaa na-enyo enyo ugbu a dị ka asọmpiegwuregwuna ihe e ji atụrụ ndụ dị ka ihe ntụrụndụ. Ndị isi ụdị nkena-agba ịnyịnyaHa bụ: Freestyle.
Kedu ụgbọ ịnyịnya igwe kachasị mfe iji nọkwasị?
Ukpurumaka ndị mbido na ụmụaka
Ọtụtụ ndị mbido na-amalite site na anụ ọhịa 20Uncle. Ọ tụgharịrị na nke anha, na-adabara ihe kacha mma ma bụrụ nke kacha adabara. Mụaka ndị pere mpe maka inch 20 ga-achọ 18, 16 ma ọ bụ 12 inch.
Agbọ ịnyịnya ígwè ọ na-agba ọsọ karịa otu igwe?
Ma ọ dịkarịa ala,igwega-enwe naanị otu ezigbo ọsọ ebe usoro ikuku nwere ọtụtụ. Aigwena-arụ ọrụ nke ọma dị ka ụgbọala. Naigweanyị enweghị ike iji ike ụgbọ ahụ mee ihe. Iheigwebụ ịkwọ ụgbọala, enweghị mgbatị, enweghị 'ịkwado'.
Onye mepụtara ịnyịnya ígwè?
E nwere ụkpụrụ na ndị pixies wetara ha. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ọ bụghị eziokwu Iheigwebụmepụtakwaranke James Bedford Elliott (1846-1906) - nke amuru na Middlesbrough, Yorkshire, UK. N'etiti 1870 ọ were penny farthing wee wepụ ụkwụ azụ.
Kedu ihe ịnyịnya ígwè bara uru na Adopt Me?
IheUnclebụ ụgbọ a na-adịghị ahụkebe naNakweere m. Ọ dị na ụlọ ahịa Toy maka 130. A na-ahazi agba tupu ịzụrụ.
Nwere ike ịga ụgbọ ịnyịnya?
Azịza ya, ee!Unicycle nwere ikegawa ebe ọ bụla ụkwụ abụọ ahụ dịnwere ikegaba. Mgbeunekpụtara n'ibu mfe - ha bụ! Achọrọ obere nlezianya iji họrọ ihe ziri eziigwemaka nke gina-agagharịmkpa.
Ridnya ịnyịnya ígwè ọ bụ ezigbo mmega ahụ?
1) Ọ bụNnukwu Mmega
Ma mgbe naanị ya nwere otu wiil, aigwebuukwumaka obi na akwara siri ikemgbatị. Wezuga ịbụ aukwuaerobicrụpụta,na-agba ịnyịnyana-emekwa ka akwara. Ọ bụghị naanị na ụkwụ gị ga-agba ọkụ mgbe ogologo oge gacharaịnyịnya ígwè, ma ọ dịkwaukwun'ihi na gi isi.June 4. 2014
Nwere ike ịkwalite na ndị otu na-adịchaghị na ịnyịnya ígwè?
Nweta nkwalite na ndị otu adịchaghị iji kenye nwa gị akwụkwọ ọrụ, egwuregwu, na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ụbọchị mara mma maka agbụrụ ịnyịnya ígwè! N'egwuregwu a, Roly, Cuz-Cuz, na Birdee na-agba ọsọ na-agbaru ma ọ dịịrị nwa gị inyere ha aka ịmata ihe ndị dị na foto nzuzu a, dabere na nkọwa na okwu mmụba.
esi egwu egwu derailleur
Can nwere ike ekenye mpempe akwụkwọ ọrụ maka agba ịnyịnya ígwè?
Ọrụ dị maka ndị otu adịchaghị. Nweta nkwalite na ndị otu adịchaghị iji kenye nwa gị akwụkwọ ọrụ, egwuregwu, na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ụbọchị mara mma maka agbụrụ ịnyịnya ígwè!
Kedu otu esi tụọ ogologo nke otu ịnyịnya?
Ọ bụ ụbọchị mara mma maka agbụrụ ịnyịnya ígwè! N'egwuregwu a, Roly, Cuz-Cuz, na Birdee na-agba ọsọ na-agbaru ma ọ dịịrị nwa gị inyere ha aka ịmata ihe ndị dị na foto nzuzu a, dabere na nkọwa na okwu mmụba. Gee ntị nke ọma na akara ngosi ọ bụla iji hụ ihe kachasị elu, dị mkpụmkpụ ma dị ogologo.